ल्वाङ्गको पानी पिएर १० दिनमै घटाउनुहोस् मोटोपन
Friday, 17 Nov, 2017 12:56 PM
ल्वाङ्गको प्रकृति गर्मी गराउने खालको हुन्छ । त्यसैल सर्दी लागेको बेलामा ल्वाङ्ग खाएमा वा यसको चिया खाएमा निकै फाइदा गर्छ । यदि तपाईं ल्वाङ्गको तेलको प्रयोग गर्दैहुन्छ भने यसलाई नरिवलको तेलसँग मिलाएर प्रयोग गर्दा निकै फाइदा गर्छ र यसको गर्मी गराउने प्रकृतिबाट पनि शरीरलाई कुनै हानी गर्दैन । यति मात्र नभएर ल्वाङ्गको प्रयोग खानामा पनि हुने गर्छ । यसमा पाइने एन्टी अक्सीडेन्ट स्वस्थ छाला र शरीरलाई तन्दुरुत बनाउनको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
ल्वाङ्गको तेलमा मिनरल्स जस्तै पोटासियम, सोडियम, फोस्फोरस, आइरन, भिटामिन ए र भिटामिन सि अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ । ल्वाङ्ग एक मात्र यस्तो मसला हो जसको प्रयोग खानामा बास्ना चलाउनको लागि य्रयोग गरिन्छ चाहे त्यो पुलाउ होस् वा मासु । यसको साथ साथै यसले तौल घटाउनमा पनि मद्दत गर्छ । ल्वाङ्गमा एन्टी कोलेस्टेरामाइन र एन्टी–लिपिड गुण हुन्छ जसले कोलस्ट्रोल र ग्लूकोजको स्तर बनिरहन्छ । ल्वाङ्ग खानाले शरीरमा प्लाजमाको स्तर कम हुन्छ । यो खानाले पाचन सम्बन्धी समस्याहरु पनि कम भएर जान्छ । यसले पाचन शक्ति पनि बढाउँछ । साथै ल्वाङ्ग खानाले पेटमा खभएका किराहरु पनि मर्छ । खानामा प्रत्येक दिन २ वटा ल्वाङ्ग खानाले खाना राम्ररी पच्छ र पाचन सम्बन्धी कुनै समस्या देखिँदैन । यदि पाचन तन्त्र ठिक छ भने मोटोपन स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ । हेरौं ल्वाङ्ग खाएर कसरी तौल घट्छ ।
ल्वाङ्ग जस्तै कालो मरीच, दालचीनी र जीरा पनि तौल घटाउनमा निकै लाभकारी हुन्छ । यी सबैलाई मिलाएर खानाले शरीरको पाचन तन्त्र सही हुन्छ र शरीरमा बोशोको मात्र पनि कम गर्छ । यति मात्र नभएर यसले ब्लड सुगर र कोलस्ट्रोलको स्तर पनि नियन्त्रण गर्छ ।
ड्ड ५० ग्राम–ल्वाङ्ग
ड्ड ५० ग्राम–दालचीनी
ड्ड ५० ग्राम–जीरा
१. ल्वाङ्ग, दालचीनी र जीरालाई तातोपानीमा राम्ररी आधा घण्टा भिजाउने र फेरी चिरो पानीले हालेर ग्राइडरमा पिध्ने ।
२. यसलाई हावा नछिर्ने बट्टामा हालेर एक हप्ता राख्ने ।
३. एक गिलास पानीमा एक टेबल स्पून मिश्रण हालेर राम्ररी उमाल्ने ।
४. त्यपछि यसलाई चिसो बनाएर छान्ने र यसमा मह मिसाउने ।
५. अब यसलाई प्रत्येक दिन बिहान खाली पेटमा पिउने ।